यिनै हुन् २५ वर्षीया युवती जो एक सातादेखि बेपत्ता छिन्, अन्तिमपटक कोसँग कुरा भएको थियो ? – Dainik Sangalo
यिनै हुन् २५ वर्षीया युवती जो एक सातादेखि बेपत्ता छिन्, अन्तिमपटक कोसँग कुरा भएको थियो ?
प्रकाशित मिति: आइतबार, आश्विन १७, २०७८ समय: १०:२२:४२
सोलुखुम्बु – एनएमबी लघुवित्त वित्तीय संस्था सोताङमा कार्यरत कर्मचारी एक सातादेखि बेपत्ता बनेका छन्। सोताङ गाउँपालिका–१ हुलु स्थायी ठेगाना भएकी २५ वर्षीया मनकुमारी कार्की गत शुक्रबार ४ः२५ बजेदेखि सम्पर्कविहीन भएको प्रहरीले जनाएको छ।जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक कवित कटवालका अनुसार अपराह्न ४ः२२ बजे साथिलाई सन्देश पठाएको र ४ः२५ बजेदेखि मोबाइल अफ भएको छ। मासिक बैठक सञ्चालनका लागि माप्य दूधकोशी–६ र ७ वाकुमा दुई कर्मचारीसँगै गएका भए पनि सोलाबनबाट हाकुला झर्नेेक्रममा छुट्टिएपछिको अवस्था थाहा नभएको मनकुमारीका बुबा चित्रबहादुर कार्कीले बताए।
काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्मुताइरीले अहिले खुशीयाली मनाउन हतार गर्न नहुने बताएका छन्। साफ च्याम्पियनसिप–२०२१ मा माल्दिभ्समाथि शुक्रबार राति प्राप्त जितका लागि नेपाल हकदार भएको बताउँदै उनले धेरै गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिए।
\_माल्दिभ्समाथिको जित आफैमा ऐतिहासिक भएको भन्दै अलमुताइरीले योभन्दा ठूलो खुशी ल्याउनुपर्ने बताएका हुन्। ‘माल्दिभ्सलाई उसकै भूमिमा हराउनु आफैमा ठूलो हो, यसको फरक महत्त्व छ। त्यसमाथि साफ च्याम्पियनसिपमै यो माल्दिभ्समाथि नेपालको पहिलो जित हो। त्यसैले म आफै निकै भावनात्मक भएको छु र उत्तिकै खुसी पनि छु । तर अहिले नै धेरै खुसीयाली मनाउन हतार पनि नगरौं,’ उनले भने।
‘म सबै नेपाली फुटबल समर्थक र अखिल नेपाल फुटबल संघ सबैलाई भन्न चाहन्छु, हामीले अझै धेरै गर्न बाँकी छ। हामी सबै काम योजनाबद्ध ढंगले तह तहमा गर्नेछौं। अब हाम्रो खेल श्रीलंकाविरुद्ध छ। हामीले अहिले नै सबथोक प्राप्त गरेका छैनौं । हामी सबै संयमित हुनु पर्छ,’ उनले थपे।
मनिष डाँगीको एकमात्र निर्णायक गोलमा नेपालले साफ च्याम्पियनसीपमा पहिलोपटक जित निकालेको थियो। उनले खेल सकिनु ५ मिनेटअघि गोल गरेका थिए।
Last Updated on: October 3rd, 2021 at 10:22 am